Waxaan horey u haystay Linux ... hada sideen u ciyaaraa? | Laga soo bilaabo Linux
Hyuuga_Neji | | GNU / Linux, Ciyaaraha, Lagu taliyay
Kuwa ciyaarta sida aniga oo kale ah waxay aqbalaan kufsiga deegaannada GNU / Linux, mar ayaan isweydiinay su'aashan oo laga yaabee in hadda waqtigu naga sii gudbayo (iyo sida aan khibrad u helayno), waan iska joojin karnaa inaan isweydiino sida loo ciyaaro, si fiican ... Qoraalkan waxaa loogu talagalay dadka cusub ee ciyaarta, gaar ahaan ka dib wararka ku saabsan Steam iyo imaatinkiisa Linux; maadaama had iyo jeer ay wanaagsan tahay in la helo barxad lagu ciyaaro, laakiin nasiib darro waxaa jira ciyaaro kale oo badan oo aan ku jirin madasha, qaarkeennuna waxay jecel yihiin inay ku ciyaaraan mar uun si fiican… halkan ayaan aadaynaa!
Ku dhowaad qof kasta oo garanaya adeegsadaha GNU / Linux wuxuu maqlay in «Linux haddii aad ka ciyaari karto»Had iyo jeerna mahadsanid Khamri, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn in Khamrigu uu yahay mid ka mid ah barnaamijyada badan ee jira ee noo ogolaanaya inaan ku dayano cayaarahayada Windows, maadaama ay iyaguna yihiin Ciyaaraha CrossOver y Cedega.
Bilowgii khilaafaadka ka dhexeeyey ma badnayn (Marka laga reebo qaar ka mid ah isbeddelada kale markay tahay is-waafajinta ama shaxanka) laakiin waqti ka dib mashruuc kasta wuxuu qaaday wadadiisa, taasoo ka dhigaysa farqigaan mid weyn. Ujeeddada qoraalkani maahan "in la bilaabo in midba midka kale la dagaallamo" laakiin waa in la bixiyo aragti guud (aragtidayda shaqsiyeed) mid kasta oo ka mid ah.
Khamrigu Gabi ahaanba waa bilaash waana laga yaabaa inay taasi tahay sababta ay uga mid tahay 3-ka kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan kuwa naga ciyaara, marka lagu daro, inteeda badan maanta waxay siinayaan suurtagalnimada inay ku rakibaan isticmaaleyaashooda.
Cedega Waxaa soo saarey shirkad la yiraahdo TransGaming waana la heli karaa haddii aad bixiso qiyaastii $ 25 USD si aad u hesho rukumo ugu yaraan 6 bilood.
CrossOver Dhinaceeda, waxaa soo saaray CodeWeavers, waxaad ubaahantahay oo kaliya lacag dhan $ 39.95 USD laakiin bixintaas waxaan horey uheli karnaa barnaamijka yar.
Khamrigu y CrossOver Kaliya kuma eka jawiyada GNU / Linux, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin noocyadooda Mac-OSX (maxaa yeelay kuwa manzanita sidoo kale waxay jecel yihiin inay ciyaaraan waqti ka waqti), halka TransGaming ay iibiso wax la yiraahdo Cider ama wax la mid ah, oo ahaa wax la mid ah eyga oo leh dabool kale laakiin u fuliya ujeeddadiisa si isku mid ah.
CodeWeavers, shirkadda ka dambeysa CrossOver waxay leedahay noocyo kale oo kor u qaadaya shaarka, sida 'Crossover-Office'. In kasta oo Crossover-Office awood u leeyahay ku dayashada cayaaraha qaarkood, Ciyaaraha CrossOver waa arjiga ay ku talinayaan in la ciyaaro, maadaama si gaar ah loogu talagalay tan oo leh jawi ay gebi ahaanba gacanta ku hayso istiraatiijiyad muuqaal ah (GUI), halkaas oo dadka isticmaala ay ka sameyn karaan dhalooyinka »si loogu hayo qaabab kala duwan oo Khamri ah oo iyaga ku jira, taas oo macnaheedu yahay inay sidoo kale noqonayso wax la mid ah kordhinta awoodaha maadaama ay noo ogolaaneyso inaan keydinno dhowr qaabeyn si aan u ciyaarno dhowr ciyaarood.
CrossOver Waxay leedahay jaantus garaaf ah sidoo kale waxay soo bandhigaysaa maktabado ay ku jiraan nacaladda / barakaysan DirectX iyo .Net. Xirmooyinka dheeraadka ah way fududahay in la rakibo, taas oo ka dhigaysa cayaaraha inay xoogaa ka dheereeyaan Khamriga. Qaabeynta wuxuu u adeegsadaa isla adeegsiga Khamrigu soo bandhigo. CrossOver waxay leedahay Macluumaad ku saabsan dhammaan Dhalooyinkeeda, keydkan xogtu xoogaa ma dhammaystirnayn; taas feker ahaanteyda ayaa laga door bidaa in la isticmaalo Wine's DB oo la dhaho ciyaarkee la socon doonta CrossOver.
Khamrigu waa lakab iswaafajiya oo u oggolaanaya deegaannada GNU / Linux inay ku shaqeeyaan barnaamijyada Windows. Si ka duwan emulator caadi ah (oo ay tahay inuu marin u helo qalabka iyo qalabka softiweer), Khamrigu wuxuu awood u leeyahay inuu galo maktabadaha Windows oo uu ka dhigo inay ka shaqeeyaan gudaha Linux. Tani waxay Khamri ka dhigeysaa mid aad uga dhakhso badan emulators-ka kale iyo mashiinnada dalwaddii. Waxaa jira tiro aad u tiro badan oo ciyaaro ah oo ay taageerayaan Khamrigu, runtiina waxay ku saabsan yihiin websaydhka mashruuca waxay martigelisaa xog ururin la taaban karo oo ku saabsan ciyaaraha la taageerayo iyo kuwa aan la taageerin, iyo sidoo kale tilmaamo ku saabsan sida loo helo qaar ka mid ah inay si sax ah u shaqeeyaan.
Khamrigu sidoo kale wuxuu leeyahay qalab qaabeynta qaabeynta oo loo yaqaan «winecfg»Oo waxaa ku jira qalab gaar ah oo loogu talagalay qaabeynta darawalka, multimedia, iwm. Xaqiiq ahaan codsigan ma soo bandhigayo wax Frontend ah oo lagu fulinayo ciyaaraha, laakiin waxaad had iyo jeer ka heli kartaa codsiyada qaar u adeega taas, ama haddii aad doorbido waxaan ka maamuli karnaa qunsulka. Ciyaaraha adeegsada OpenGL waxaa lagu taageeraa Khamriga dhexdiisa, xitaa qaar adeegsada maktabadaha DirectX ee laga heli karo shabakadda. Qalabka shabakadda .Net ma sahlana in lagu rakibo Qamriga, laakiin cayaaraha raba waxyaalahan waxay u muuqdaan kuwo si fiican u socda. Waxa kale oo aad ku dari kartaa waxyaabo kale oo yaryar oo dheeri ah sida qaabka loo yaqaan 'MS Corefont font' (mahadnaqa qoraalka la yiraahdo khiyaamo khamri taasi waa lagu faafiyay shabakadda).
Cedega Waxay leedahay istiraatiijiyad adag oo muuqaal ah (feker ahaanteyda ugu xooggan ee 3) oo leh qalab badan oo lagula falgalo sawirada, codka iyo kuwa kale. Waxay ku saleysan tahay wax yar oo duug ah oo Khamri ah, kaas oo durba aad uga fog wixii markii hore ahaa khamriga asalka ah Mararka qaar, Pixel Shaders iyo teknoolojiyada kale waxaa la siiyay taageero weyn iyo xaaladaha kale iyadoo la sameynayo in ciyaaro badan ay ka socdaan Wine oo aysan ka socon Cedega. Cedega wuxuu taageeraa OpenGL iyo Directx xoogaa waafajinta Wine iyo CrossOver ayaa lagu daray wixii ku saabsan Directx. Mid ka mid ah qodobada daciifka ah ee Cedega ayaa ah taageerada ay u fidiso .Net maadaama ay suurta gal aheyn in la rakibo maktabadahaan taasoo ka dhigeysa in ciyaaraha ku tiirsan aysan ka socon karin Cedega.
El Websaydhka Trasgaming waxaa ka mid ah keyd weyn oo loogu talagalay ciyaaraha ay taageerayaan Cedega, kuwaas oo ay heli karaan oo keliya dadka isticmaala ee bixiya diiwaangelinta. Xaaladaha qaarkood, xitaa haddii BD ay dhahdo ciyaarta ayaa socota ama ma; macluumaad yar oo dheeraad ah ayaa had iyo jeer la bixiyaa. Mar alla markii rukumaddu ay dhammaato dalabka ayaa sii wadaya inuu shaqeeyo, kaliya waxay lumineysaa taageerada keydka macluumaadka iyo waxyaabo ay heli karaan oo keliya macaamiisha.
Doorashada madal rasmi ah
Nasiib darrose ma jiro mid ka sarreeya kuwa kale, sidaa darteed mid ka mid ah xallinta ay dadka kale ee kaftanka badani ii sheegeen inta badan waa falsafadda «haddii aad rabto inaad sare u qaaddo xaddiga ciyaaraha daaqadaha ee kombuyuutarkaaga isticmaal dhammaan 3“Marka aan runta ka hadlo falsafadan ayaa laga yaabaa inay u shaqeyso qaar, laakiin xilligan waxaan la joogayaa kaliya 1 ka mid ah.
In kasta oo lagu saleeyay Khamri, haddana 3duba waxay u shaqeeyaan si ka duwan mid walbana wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa; tusaale ahaan: DB-ga ugu fiican waa kan Khamriga, halka taageerada ugu wanaagsan ee xirxirida xirmooyinka ay bixiso CrossOver, sidoo kale taageerada ugu wanaagsan ee tikniyoolajiyadda Pixel Shaders waxaa bixiya Cedega. Ciyaaraha Wine iyo CrossOver waxaa laga maamulaa liiska isticmaalaha halka Cedega laga maamulo arjiga Cedega.
Ula jaanqaadida Windows gudaha GNU / Linux deegaannadu weligood ma noqon doonaan kuwa ugu wanaagsan, laakiin uguyaraan waa wax fiican in la ogaado inaan heysano seddexdan xalka oo naga caawinaya inaan hoos u dhigno faallooyinka kale ee ku badan maskaxda dadka isticmaala Windows:Ma jecli Linux maxaa yeelay kuma ciyaari karo«.
Haddii, sidaan oo kale, wali aad hayso haraaga qaar ka mid ah ciyaaraha Windows-ka oo aad doorbideyso inaad isticmaasho Linux (adigoon culeys ka haysan inaad isticmaasho laba boot) markaa waad ogtahay, qalabkan waad sameyn kartaa.
Halkan waxaa ah Shaashad Daabac ah oo ka mid ah Blizzard franchises (World of Warcraft) oo lagu daydo 'Crossover' oo ku saabsan LXDE-ga.
Dunida Diyaaradaha (WoW) oo lagu dayday LXDE
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Waxaan horey u haystay Linux ... hada sideen u ciyaaraa?
Waxa ugufiican, mudo gaaban waxaan kuheli doonnaa Command & Conquer on Linux.
Marka khamri iyo wixii la mid ah muhiim ma noqon doonaan.
khamrigu had iyo jeer waa lama huraan ... hada oo aynaan hada u mashquulin si aan u ciyaarno way ka duwan tahay laakiin ugu dambeyntii waxaan rajeynayaa inaysan waligood ka tagi doonin mashruucan wanaagsan sida khamriga
Dadka oo dhami dadka uma isticmaalaan khamri si ay u ciyaaraan, sida aad moodid inaad u malaynayso.
Xaqiiqdii waad saxantahay, Khamriga marwalba looma adeegsan in lagu ciyaaro (waxaa jirtay waqti aan u isticmaali jiray Photoshop laakiin markaan ogaaday GIMP waan joojiyay sameynta)
Sidoo kale wuxuu u yimaadaa Steam Linux.
Waxyaabaha uumiga ahi waa war weyn.
Waxa aniga i dhibaya waa maxay sababta ay ugu kici lahaayeen kuwa horumariya wax badan si ay u abuuraan barnaamijyadooda iskutallaabta? Waa maxay heck, sidee dhibsasho u leedahay in la liqo Windows kaliya sababtoo ah codsi ayaa loo heli karaa si gaar ah barnaamijkaas.
In kasta oo kaliya aan ku jiray Linux muddo 3 bilood ah, oo aan ahaa ciyaar waqti-buuxa ah, waxaan u maleynayaa in khamrigu yahay aalad aynaan u adeegsan ujeeddooyinkan, sida Rots87 uu leeyahay, khamriga waa in loo adeegsadaa ujeedooyin kale, kuwa doonaya inay u ciyaaraan taas sug imaatinka uumiga ama ciyaaro cayaaraha wanaagsan ee jira ee Linux.
inkasta oo aan ahay nin cusub hadana waa shuruudahayga hooseeya.
PS: Uma jeedo inaan dhaho khamrigu wax ma taro, taa cakiskeeda, anigu ma arko dhibku ku jiro adeegsiga qalab ahaan.
sidoo kale si aadan ugu sugin quus quus ah waxaa jira Desura macmiil u ah ciyaaraha sida uumiga
Ka qayb qaadasho wanaagsan, waad ku mahadsan tahay inaad na ogeysiisay boggan.
Adigu waad tagtaa oo waxaad iibsataa xbox ama wax u dhigma oo waxaad ka tagtaa bucshiradda
Dhamaanteen ma iibsan karno pc iyo konsol, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan si macquul ah ugu ciyaarno compuskeena.
Taasi ma aha sidoo kale. Waxaa jira dad jecel inay ciyaaraan hal ciyaar oo kaliya loogu talagalay PC-Windows.
Xalku waa horumariyayaashu inay joojiyaan taabashada sanka oo ay abuuraan barnaamijyadooda iskutallaabta si aan si xor ah ugu dooran karno madal aan doorbidno.
Way cadahay inaadan aqoon ciyaaraha, ma waxaan ku weydiiyay, ma ku ciyaari kartaa Dota2, Aion, Artic Combat ama World Wacraft lafteeda xbox?
Anigu ma ihi ciyaartoy aad u fara badan, laakiin dhowr sano ka hor waxaan doonayay inaan xasuusto maalmahaygii bilawgii qarnigan, markii laygu badiyo ciyaaraha, oo waxaan ku orday Starcraft iyo Age of empires Playonlinux, codsi ku saleysan Khamri oo diiradda saaray habka bilaabi ciyaaraha, badanaa (laakiin sidoo kale codsiyada kale), Windows. Ma aqaano sida horumarinteeda ay hadda ahaan doonto, laakiin markii aan u adeegsaday waxay iga dhigtay mid aad uga saaxiibtinimo badan Khamriga.
Hada, markaan dareemo inaan ciyaaro, ugu badnaan waxaan ku oogayaa Megaman emulatorka Bsnes, hehe.
Ma doonayo inaan sumcad xumeeyo maqaalka.
Laakiin waxay ahayd waqti dheer tan iyo markii cedega uusan jirin, hadda waxay isugu yeeraan gametree, ciyaaro iskutallaab ah ayaa lasocday xafiiska iskutallaabta noocyo kahor. Maqaalka wuxuu u baahan yahay cusbooneysiin si uusan u abuurin jahwareer
Waad ku mahadsantahay faalladaada…. Runtii ma aanan ogeyn tilmaamahaas hadda jira maxaa yeelay si daacad ah ... Waxaan u isticmaali jiray Khamriga, Cedega iyo Crossover-ka Jaamacadda laakiin imaatinka Winetricks iyo Winex (qoraallo lagu hagaajinayo khibradda ciyaaraha ee Wine) waan joojiyay isticmaalka kuwa dhufto ee
Waxaan u isticmaalay Cedega on Gentoo dib 2009 si aan u ciyaaro WoW. Way igu fiicneyd aniga, taas oo mararka qaar jajabiso minimap, laakiin wax walba waa ok. Oh, kuna qasab config.wtf inay adeegsato OpenGL.
Neji: igu qor ozkar at cristal dot hlg dot sld dot cu.
Waan ku faraxsanahay SuperTuxKart hahahaha iyo kahor intaanan ciyaarin sauerbraten, ma jecli ciyaaraha hahaha
Waxay i siisay fikrad wanaagsan oo ku saabsan sida loola taliyo kuwa xiiseynaya mawduuca.
Kaliya waxaan ciyaara mararka qaarkood laakiin qunsulka ... amar waana halkaas meesha aan ka helo. Qaar u guura GNU / Linux ayaa noqda ciyaartoy ku xigeenka ku dhowaad ma doonayo jawi garaaf leh, iyo kuwa kale ciyaartoy Noloshooda oo dhan markay yimaadaan waxay qabtaan cabsi cabsi leh oo ka cabsi badan Qiyaamaha.
Kudar Dosbox, iyo ciyaaraha wadaniga ah, sida Quake Live oo ka socda firefox ama xitaa dekedaha loogu talagalay Quake ama Qiyaami hore iyo taxaneyaal ku saleysan waxay lajireen halaag shukulaato iyo dekado kale
Dabcan PlayonLinux taas oo fududeyneysa rakibidda ciyaaro kala duwan oo leh qoraalladeeda.
Hadana haddii aad haysatid kumbuyuutar awood badan, ka wanaagsan haddii aad haysato laba kaararka fiidiyowga ah ee loo yaqaan 'Xen video kaar ah' VGA Passthrough 'oo leh' MS WOS ', markaa waxaad yeelan doontaa Linux AAN LAHAYN VIRUSES oo ah nidaamka ugu muhiimsan, oo aad dhammaystirto MS WOS oo kudayasho ah 95% ama ka badan awoodda mashiinka, xitaa 105% haddii lagu rakibo antivirus la'aan marka la barbardhigo rakibida antivirus - antivirus-ka ka socda Linux oo qeybta W WOS ku xiran ka waqti ka waqti markaad ka raadineysid Linux -
Nasiib darrose, inaad ku rakibto Xen oo leh VGA passthrough waa inaad haysataa kumbuyuutar casri ah, ku dhowaad dhammaan I3 / i5 / i7 way taageeraan iyo kuwa ugu horumarsan ee ka socda AMD sidoo kale, laakiin waa inaad hubisaa
Sugitaanka qeybta labaad ee maqaalka oo leh talooyinka aan sameyno, waad ku mahadsantahay shaqadaada.
Maqaalkani wuxuu u muuqdaa sidii dib-u-habeyn (tarjumaad bilaash ah) tan kale (ugu yaraan waxaan arkaa isku dhacyo badan):
Waxaan u maleeyay inay lagama maarmaan tahay in la sheego ishaas.
Xaqiiqdii, hadda markaan eegay, waxaa jira seddex qabsasho oo isku mid ah labadaba (asalka waa in lagu sheegaa maqaalka).
Dhibaatada qabsashadu waa qaladkeyga… markaan la yimaado mowduuc gaar ah, waxaan marka hore qoraa sidaan u maleynayo ka dibna waxaan u sheegayaa San Google inay i tusaan sawirro waxa aan raadinayo sidaa darteed aad ayey macquul u tahay inay yihiin isla kuwii la qabtay. Si kastaba ha noqotee, maqaalkaas aad u jeeddo wadahadal ku saabsan isla mowduuca sidaas darteed sidoo kale waxaa lagu dari karaa doodda ... markale waad ku mahadsan tahay faalladaada.
Hagaag, jawaabtaada ayaa iga yaabisa. Waxa dhacay waa wax layaableh. Labada maqaal waxay leeyihiin qaab dhismeed isku mid ah, waxay wadaagaan 3 shaashadood oo runtiina waxaa jira cutubyo isku mid ah. Fiiri tusaale:
Khamrigu sidoo kale wuxuu leeyahay qalab qaabeynta qaabeynta oo loo yaqaan "winecfg" waxaana ka mid ah qalab gaar ah oo loogu talagalay qaabeynta darawalada, warbaahinta badan, iwm. By ahaan codsigan ma soo bandhigo wax Frontend ah oo lagu fulinayo ciyaaraha, laakiin waxaad had iyo jeer ka heli kartaa qaar ka mid ah codsiyada u adeega taas.
Isbarbardhig tan tan:
Qalabka qaabeynta garaafka ee Khamriga waxaa lagu magacaabaa "winecfg" (Qaabeynta Qamriga), waxaana ku jira aaladaha lagu qeexayo wadayaasha, isku habeynta warbaahinta, qaabeynta qaababka, iyo isdhexgalka miiska. Sida caadiga ah, ma jiro jihada hore ee garaafka ee rakibidda ama socodsiinta ciyaaraha, laakiin waxaa jira barnaamijyo dhinac saddexaad oo bilaash ah oo u dhaqmi kara sidii hore.
Waxay ahaayeen wax kadis ah oo lama filaan ah. Raali noqo is fahan la'aanta.
Tilmaam ugu dambeeya ee maqaalka. Beddel qiimaha lacagaha ee Cedega iyo CrossOver Games. Waxaad dhigaysaa isla kuwa ka muuqda maqaalka kale iyaguna waa kuwo gaboobay ;-).
Hagaag, waad ogtahay saaxiib, kan xiga waa inaad sheegtaa isha boostada aad ku tiirsaneyd inaad qorto taada, iyo sidoo kale inaad sheegto isha shaashadda laga soo qaado (haddii aadan adigu ka sameyn karin PC-gaaga).
Taabadalkeed, waxaan u maleynayaa inuu isagu oran lahaa waxay ahayd turjumaad oo tixraac websaydhka maqaalka uu ku yaal.
Uma maleynayo inay aad u adag tahay in la qoro maqaal ku saabsan khamriga, way ka fiican tahay inaad turjumaad sameysid oo aad koobiyeysato sidaada oo kale
Marna ma aanan sameyn tarjumid, haddii kale waxaan kuu keeni lahaa qoraalka barta sidaan oo kale: tarjumida maqaalka X mareegtada meel kasta oo aan joogo, kama ihi mid ka mid ah kuwa doonaya inay ku kasbadaan shaqada dadka kale iyo sidii aan horayba ugu jawaabay isticmaale kale Screenshots-ka waxaa laga soo dejiyey Google markaa haddii ay ka socdaan maqaalkaas mar labaad ayaan raaligelin ka bixinayaa.
Barnaamijyada badan ee jira ee noo ogolaanaya inaan ku dayano ciyaarteena Windows-ka.
Khamri sida magaceeda u sheegay, ma aha emulator ah http://en.wikipedia.org/wiki/Wine_%28software%29
Intaas waxaa sii dheer, intii aad dhihi laheyd in Khamrigu gebi ahaanba bilaash yahay, waa inaad dhahdaa gebi ahaanba waa bilaash, sida ujeedku sheegay kooxda horumarinta "Khamrigu marwalba wuxuu noqon doonaa barnaamij bilaash ah."
Waxaan su'aal qabaa, waxaan hayaa khamri badan oo jiilaal ah, qof ma ii sheegi karaa maktabadaha aan ku rakibo kaaliyaha winetricks si aan khamri ugu fiicnaado ciyaaraha? Maxaa dhacaya ayaa ah markaan furo saaxir winetricks, dhowr qaybood ayaa soo muuqda mana garanayo waxa la rakibo? ama ma sameyn kartaa qoraallo qoraal ah oo arrintan ku saabsan?
Ma jecli isticmaalka Khamriga gebi ahaanba laakiin ma aanan helin barnaamij ka fiican kan ares ee Linux, waxa aanan fahmin ayaa ah sababta ares loogu samayn waayey Linux haddii ay tahay 100% Source Open. Aniguna kamaan jeclayn amuuka marka la barbar dhigo emule.
Gaara ugu dambeyntii ma soo degsatay isgoyska 32 bits? Taas la'aanteed waan bilaabayaa!
U soo dir xiriiriyaha emayl ahaan (kzkggaara [@] desdelinux [.] Net) si aan u soo dejisto ka dibna ugu dhejiso a .CU
Waxaan hayaa nooc duug ah (6.0) oo ah iskutallaabta laakiin ma isticmaalo
waa hagaag, waxaan la socdaa Kubuntu 12.04 ... waxaanan ciyaaraa maalin kasta Warcraft 3 (Dota) waxaanan ciyaaraa World of Warcraft… waa inaan qirnaa in mashruuca Wine uu kordhayo…. Weli waxay ubaahantahay in la nadiifiyo waxyaabaha qaar .. laakiin waxay xalinaysaa, inyar kahor waxaan iTunes ku rakibay KDE-ga, ma furi doono 100% laakiin uguyaraan waa wax. Wax kale oo aan quraac u cunay maalmihii kale ee Khamrigu lahaa ilaa regedit-ka leh daaqado, aniga in: 0 markaan aqriyay hehe.
Frikilui (Louis) dijo
Waan ku salaamayaa qof kasta oo ka socda Monterrey, NL Mexico,
Muddo dheer ayaan raacayay balooggan (aniga oo aan isdiiwaangalin) hadana waxaan ubaahanahay caawintaada; Waa hagaag, waxaan isku dayay waxyaabo badan oo hadda jira oo ah qaabka tooska ah (ubuntu 12, LMDE, Sabayon 9, Fedora, mageia 2 ma bilaabayo) laakiin midkoodna ma i siinayo is waafajin buuxda shaxdeyda ama halkii ay wax i siineyso 3D ama 2D dardargelin buuxda, muuqaalkeyga ayaa ah Ati Xpress 200m 128mb oo ah fiidiyow la wadaago oo ku saabsan laptop-kii hore ee Compaq Presario V2615LA (V2000) laakiin waan jeclahay XD, hada waxaan haystaa Ubuntu 12.04 laakiin glxgears ayaa kaliya igu kicinaysa 427 loox 5.0 ilbiriqsi ah = 85.242 FPS oo 50fps ah oo ay ku soo kordhisay wax ka beddelka qaarkood. taasi waa gogleando, halka fedora iyo lmde kaliya 50 fps iyo sabayon 120 fps laakiin midkoodna isiin maayo dardar galin wanaagsan iyo ciyaaro fudud sida gacaliyahayga super tux 2, waan ogahay in amd-ati ay joojisay taageerida jaantuskan maamulayaasheeda cusub. Laakiin sida aad u aragto, waan quusanayaa mana doonayo inaan mar kale ku guuleysto qashinka.
Waxaan u arkaa naftayda celcelis cusub oo GNU / Linux ah, waan ogahay tan 90-meeyadii laga soo bilaabo koofiyad cas laakiin kama tagin maxaa yeelay ma aanan aqoonsan dhawaqa waxaanan dib ugu noqday guuleysiga 98se XD
Hada Ubuntu waxaan ku hayaa darawalka Gallium 0.4 ee llvmpipe (LLVM 0x300).
Waad ku mahadsan tahay horay haddii aad i siin kartid caawimaad iyo kun raali gelin haddii aanan ku dhejin faallan halkan.
Jawaab Frikilui (Luis)
Waan ka xumahay, wixii disto ah ee aad ku talinayso ama qaabeyn kasta oo aan ku dabaqo, waxba kama qabo isticmaalka terminalka oo waxaan horeyba u qaatay wax badan oo XD ah haddii qof uu weydiiyo XD.
OK ,,, Waxaan la joogayaa LMDE XDD
Sidee ayuu WoW uga shaqeeyaa Linux maanta?
Ma ciyaaro ciyaaro, laakiin waxaa jira saaxiib sameeya oo jecel inuu u wareego Linux iyo Play, isagoon haysan daaqado fasalka 2aad ah.
Ma u baahan tahay shuruudo badan?
reNIX: mawduuc cusub oo GTK3 ah oo qaab casri ah loo yaqaan 'Android style' ah